Uri Kuzviita Zvisirizvo! | Martech Zone
Sevashambadzi isu tese tinoziva zvizere nezvekuti zvakaoma sei kuchinja hunhu hwevanhu. Icho chimwe chezvinhu zvakaomesesa iwe zvaunogona kuedza kuita. Ndokusaka Google, parizvino, ichizonakidzwa nekuenderera mberi kwekutsvaga, nekuti vanhu vajaira "Google iyo" pavanoda kutsvaga chimwe chinhu pawebhu.
Kuziva izvi, ndinonakidzwa nenhamba yevanhu vandinoona paTwitter nemablog ari kuudza vamwe kuti vari kushandisa Social Media zvisizvo. Chinonyanya kundifadza ndechekuti ava ndivo vanhu vari kushanda sevanopa mazano kana kumahofisi, angave ari PR, Kushambadzira, kana Zvemagariro Media.
Iwe unoda chakavanzika chekuti ungasimudzira sei Social Media uye kubatsira makambani kukura bhizinesi ravo online? Regedza kuudza vanhu kuti vari kuzviita zvisirizvo uye tanga kuudza vanhu kuti vangazviite sei zvirinani. Hapana munhu anoda kuudzwa kuti ivo vari kukanganisa, ivo vanoda kuziva maitiro ekuvandudza bhizinesi ravo. Iyo iri nyore nzira yekukudza bhizinesi rako uye nekuona zvirinani kugamuchirwa kwemagariro enhau maitiro padanho rekambani
Isu tese tiri kudzidza mashandisiro ekushandisa maturusi aya, kupa vanhu simba uye kuona bhizinesi rako richisimuka.
Tags: hazvina kukodzeramitemomagariro enhau anotongazvakaipauri kuzviita zvisirizvo
25 Matanho Ekubudirira: Tsvaga Injini Kugonesa uye Bhizinesi Kubloga
Brody PR: Nguva yekuPIYA yako Ruzhinji Rwehukama Hwakasimba Firm
Aug 19, 2009 na4: 06 PM
Ini ndinobvuma .. ndakaita ichangoburwa yakanzi "Social Media ini ndoda muperekedzi?" Ini ndinoona varidzi vebhizimusi vachiwedzera kana kufunga kana kutanga kuita zvemagariro venhau asi wanikwe paine kudimburwa kudiki. Zvimwe hazvizive uye zvimwe zvinokanganisa kugona kwesocial media. Kune vazhinji "NYANZVI" vari kuzviti nyanzvi kana anovimbisa mhedzisiro ivo pachavo vasina kuwana. Nekushaikwa kwezivo uye nguva yekudzidza, varidzi vebhizinesi vari kungotengeswa. Ini ndinotevera uye ndinoremekedza avo vari munharaunda vezvenhau sekunge dai ndaive ndakatarisa kwavari semubatsiri wezvemari. Kana mupi wezano wezvemari asati azvisimbisa pachavo nemari, vaigona sei kundibvunza ini.
Ndingafarire chero mhinduro pane yangu blog http://yougonetwork.com/johnnie_firari/2009/08/so… Chimwe chinhu semuridzi webhizimusi diki chandiri kuumba nekushanda kuzvipira kwachiri. Ndatenda.